बझागं छोडेर अचानक किन रुँदै काठमाडौ फर्किइन् सोनिका रोकाय ? (भिडियो हेर्नुस्) – Khabaarpati
December 13, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on बझागं छोडेर अचानक किन रुँदै काठमाडौ फर्किइन् सोनिका रोकाय ? (भिडियो हेर्नुस्)
लामो समय बझागं बसेकी उनले त्यहीँवाटै भिडियो सार्वजनिक गर्दै आएकी थिइन् । उनले बझागंका गाउँले परिवेशका भिडियो बनाउँदै आएकी थिइन् । त्यस्तै मोडल तथा युट्युवर सोनिका रोकायसंग भिडियो निर्माणमा सहयोगी भएकी रेखा राई अहिले आफ्नै युट्युवमा लागेकी छन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **